खोटाङकाे विद्यालयमा कुटो-कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको शिक्षा दिइन्छ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
खोटाङकाे विद्यालयमा कुटो-कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको शिक्षा दिइन्छ
विद्यालय भन्नेबित्तिकै बिहान बेलुका घरको काम भ्यायो, दिउँसो कक्षामा सरहरुले पढाएको किताबको पाठ पढ्यो र फक्र्यो । बेलुका घरमा आएर गृहकार्य ग¥यो अनि फेरि भोलिपल्ट विद्यालय गएर सरलाई बुझायो ।
नेपालको शिक्षा नीति यसैको परिधिभित्र रुमल्लिएको छ । अहिलेको पुस्ताले आर्जन गरेको शिक्षा किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित छ, व्यावहारिक छैन । देशविदेशका ठूल्ठूला शिक्षाविद्ले लेखेका पुस्तक पढ्यो, अन्त्यमा पढायो–पढायो पाठ, सोह्र दुना आठ…भन्ने उखान मै चरितार्थ हुनपुग्छ । धेरैले भन्ने गर्छन्, नेपालको शिक्षा बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हो ।
हुन पनि हो, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म हासिल गरेका एउटा विद्यार्थीले काम कसरी गर्ने ?, प्रक्रिया के के हुन् ? कसरी काम गर्दा नयाँ/नयाँ वस्तुको आविष्कार गर्न सकिन्छ ? भनेर कहिल्यै सिकेका हुँदैनन् । यही पुरातन शैलीको शिक्षाका कारण आज लाखौँ युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुपरेको छ । तर, पछिल्लो समय जिल्लामा एउटा यस्तो विद्यालय स्थापना भएको छ कि जहाँ कुटो कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको शिक्षा दिइन्छ ।
काठ चिर्ने मेशिनमा धार लगाउन सिक्दै
व्यावहारिक शिक्षा दिइने विद्यालयका भित्तामा लेखिएको छ ‘कोदालोमा क्रान्ति, कलममा क्रान्ति, कम्प्युटरमा क्रान्ति’ । ‘ध्यान दिएर सुनौँ, नियालेर हेरौँ…, काममुखी शिक्षा, शिक्षामुखी विकास…, मानवद्वारा सिर्जित दिसा, पिसाब र पसिना बिरुवाका लागि अति राम्रो
खाना हो…, हुलको हैन रुलको शासनमा मरिमेटौँ… आदि ।’
विद्यालयको भित्तामा यसरी लेखिएका नारा पढ्नेबित्तिकै कमै मानिस मात्र प्रभावित नहोलान् । विद्यालयमा पुग्ने अधिकांशले विद्यालय सञ्चालकलाई सोध्ने गरेका छन्, “यी विद्यार्थीले पढ्नुपर्दैन ?, कतिबेला पढ्छन् ?, उत्तीर्ण हुनलाई परीक्षा दिनुपर्दैन ?” तर, कुरा अर्कै रहेको छ । उनीहरुले जुन काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यो उनीहरुको व्यावहारिक शिक्षा हुन् । त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कोही असफल हुँदैनन् । उनीहरु अन्य विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा सैद्धान्तिक विषयमा पनि अब्बल छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा तीन शिक्षकको दरबन्दी भएको त्यस विद्यालयमा सात जना मात्र विद्यार्थी भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खारेज गरेको थियो । बाह्र वर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ भन्ने उखान झँै समयले यसरी कोल्टे फे¥यो कि उक्त विद्यालयमा पूर्वका झापा, इलामदेखि पश्चिमका जुम्ला हुम्लासम्मका ३२ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विद्यार्थी कुचो बुन्ने अभ्यास गर्दै
जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले यसखाले पठनपाठनले आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो । “पाठ्यक्रमकै आधारमा कृषि, पशुपक्षी, घर निर्माण, उद्योग, कम्प्युटरलगायत जीवनोपयोगी ज्ञान दिने विधि अपनाइएको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो – “यहाँको शिक्षण विधि अपनाउने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्दैन ।”
विद्यालयको शिक्षकमध्ये सरकारी दरबन्दीमा अहिले प्रावि तहका एक जना (सविता ढकाल) मात्र छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि कृषिविज्ञ मदन राईले खोल्नुभएको शुभम् फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
विद्यार्थीका लागि हरेक शुक्रबार साँझ ‘गुड फ्राइडे’ भनेर साङ्गीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम राखिएको छ । विद्यार्थीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा केन्द्र तथा जिल्लास्तरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुख पनि बेलाबेला सहभागी हुने गरेका छन् । तस्बिर : केदार मगर/खोटाङ, रासस